Kedu ihe nwere ihu na-apụ apụ na otu esi arụ ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-ekiri ihu igwe na telivishọn ugboro ugboro, ị nụla na e nwere ọtụtụ ụzọ ihu. Nke mbụ, anyị na-ahụ ihu ihu na-ekpo ọkụ, mgbe nke ahụ oyi na nke ọzọ a na-akpọkarị gbachiri ihu. Typedị ọ bụla dị n'ihu nwere njirimara dị iche iche na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa maka ya. Ihu ihu zoro ezo bụ ngwakọta nke ihu ihu oyi na ọkụ.
You chọrọ ịmatakwu banyere ihu na ihu igwe? N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile gbasara ọghọm zoro ezo na ndị ọzọ.
1 Kedu ihe bụ ihu?
2 Typesdị n'ihu
2.1 Oyi ihu
2.2 Ihu ọkụ
2.3 Ọ bụ ọkpọiso
2.4 Ihu ihu
Kedu ihe bụ ihu?
Tupu ịmata ụdị nke ihu, nguzobe ha na nsonazụ ya maka ihu igwe, ọ dị mkpa ịmata ihe ihu bụ. Mgbe anyị na-ekwu maka ihu na-abịa nakwa na ọ ga-eweta ajọ ihu igwe, anyị na-ekwu maka ya warara nke ikuku ikuku abụọ dị iche iche dị iche. N'ihu ndị a, na-echebara ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku ọ bụla na nke na-agagharị ngwa ngwa, anyị nwere ike ịkọwa ha n'ime ihu oyi, ọkụ, nzuzo na ihu ihu.
E wepụtara okwu n'ihu site n'asụsụ ndị agha. Nke a bụ n'ihi na mgbe ndị ikuku gbasara na kọntaktị, ha na-arụ ọrụ yiri nke a na-eme n'ọgbọ agha. Enwere rumbles na ebili mmiri eletrik, ọkpọsọn̄ ofụm ye ọkpọsọn̄ edịm.
Functioningrụ ọrụ nke ihu ndị a a na-ekpebisi ike ya site na mgbanwe mgbanwe ikuku. Ntọala nke nrụgide nke ikuku anyị na-ahụ na mpaghara dịka ọnụọgụ nke oke ikuku na ọnọdụ okpomọkụ ha ka a na-akpọ sistemụ ikuku. A na-eduzi sistemụ nrụgide ndị a site na ikuku ikuku, ebe ọ bụ na ikuku na-achọ ịkwaga na mpaghara ebe a na-enwe nrụgide karị ebe ọ dị obere.
Usoro ihe omumu nke mbara ala nwere ike imetụta ihu ihu. Ugwu na nnukwu mmiri na-egbochi mwepụ nke ikuku. N’okwu ndị a, ike na mmalite nke ihu n’ihu na-agbanwe kpamkpam.
Anyị ga-enyocha ụdị ihu ọ bụla dabere na njirimara nke ọ bụla na otu ha si dịgasị iche dabere na nke ọzọ nke mgbanwe ihu igwe.
Ọdịdị oyi a bụ site na warara nke anyị na-ahụta enweghị ike ikuku. A na - akpata ya n'ihi na ikuku ikuku oyi bụ nke na - agabiga ikuku ikuku dị ọkụ. Mgbe ị na-aga n'ihu ikuku oyi na-ezukọ ikuku dị ọkụ, otu ụdị wedge na-adị ebe ọ na-abanye n'okpuru ikuku dị ọkụ. Ikuku oyi nwere njupụta dị elu dịka o nwere obere okpomọkụ yabụ, ka ọ na-adịkwu arọ karị, ọ na-agbadata ma nọrọ oghere dịkarịrị elu ụwa.
N'aka nke ọzọ, ikuku ikuku dị ọkụ, na-adị ntakịrị, a na-edochi ya n'ụzọ dị mfe n'elu ma na-ebuli elu. Mgbe igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ma ọ nọ na ọkwa ndị dị elu na ọdịda nke okpomọkụ dị n'okpuru ogo 0, ọ na-eme ka ikuku ikuku, na-eme ka igwe ojii na-emepe emepe. Ọ bụ igwe ojii ndị a nwere ike iweta ọgba aghara nke ikuku dị ka mmiri ozuzo ma nwee oke ikuku. N’ebe di elu ka a ga-enwe oke ikuku mmiri.
Ka oyi na-aga n'ihu, anyị na-ahụ ebe dị mmiri mmiri ma ọ gafere, ọ na-ahapụkarị ebe kpọrọ nkụ. Mgbe ihu oyi na-aga n'ihu, ọ na-ebute oke okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ. Dabere na mpaghara ebe anyị nọ na oge nke afọ ọ na - eme, ihu igwe na-adịkarị n'etiti 5 na 7 ụbọchị kachasị.
Ihu ọkụ na-ekpo ọkụ bụ nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-aga n'ihu iji dochie ikuku oyi. Na mkpokọta, mgbe ihu ihu na-ekpo ọkụ na-aga n'ihu, ọ na-ahapụ ụzọ ịrị elu nke okpomọkụ na iru mmiri. Bawanye mgbanwe ndị a na-eme ka nrụgide nke ikuku daa, yabụ a ga-enwe ụfọdụ oké mmiri ozuzo na-adịchaghị njọ. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ mmiri ozuzo ma ọ bụ ikuku ifufe nwere ike ịmalite oké ifufe, ma ọ bụrụ na elu ya enye ya ohere.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe a na-ahụkarị foogu na ikuku oyi mgbe ọ na-ebute ihu ọkụ ọkụ.
Ugbu a, anyị ga - akọwa n’ihu ndị echefuru echefu ma ọ bụ ndị niile kacha mara. Ma ọ bụ na ihu nwere ike ịsị na ọ bụ ngwakọta nke ha abụọ. Maka ụdị iru a ga-eme, ọ ga-adịrịrị ihu ngwa ngwa na-ekpo ọkụ na-esote ihu igwe na-agagharị ngwa ngwa. Mgbe nke a mere, ikuku oyi na-agbanye nke dị ọkụ ma ọ na-asọ ya elu n'ihi na ọ na-agbagharị karịa na oke ọsọ.
Ọ bụ mgbe ahụ ka ihu abụọ ahụ gafere n’ihu nke ọzọ. Ahịrị na-etolite ma na-ekewa abụọ ikuku bụ ihe a na-akpọ ihu zoro ezo. Ke ofụri ofụri, ụdị ihu a jikọtara ya na ụdị igwe ojii dị ka strata na na-esonyere ìhè ọdịda. Ha na-etolite na mpaghara nke nrụgide dị ala na mgbe ebe ndị ahụ na-ada mbà.
Na map ihu igwe, ị ga-enwe ike ịhụ marking nke ihe occluded n'ihu n'ihi na ha na-akara a odo odo dotted akara. Nke a pụtara na akara nke ihu oyi na nke dị ọkụ bụ ndị na-egosi ntụpọ ngagharị nke ihu.
N'ikpeazụ, anyị ga-enyocha ihu ihu igwe. Ọ bụ oke etiti dị n’etiti ikuku abụọ. Onye ọ bụla igwe ikuku di ike dika nke ozo, ya mere o nweghi ike iwepu ma obu dochie ozo. Anyị nwere ike ịchọta ọnọdụ dị iche iche nke ikuku na ihu ihu igwe. Kacha n'ozuzu bụ ogologo mmiri ozuzo na igwe dị.
Mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, ihu abụọ ahụ na-agbasa ma ọ bụ bụrụ ihu na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihu oyi. Ọdụ ndị a na-anọ ọdụ bụ oge kachasị oge ọkọchị. Ogologo mmiri ozuzo metụtara ha bụ ihe kpatara idei mmiri n'oge ọkọchị.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụ banyere ihu zoro ezo na ọdịiche ya na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọ bụ ọkpọiso
Ogologo site na uwa rue anyanwu